Ukukhiqizwa kwe-LSR & Rubber - Chapman Technology Co., Ltd.
UMenzi weChapman iyakwazi ukuhlinzeka ngezinqubo zokulawula ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezidingwa izimboni zezokunakekelwa kwempilo nezedivayisi. UMenzi weChapman yi-ISO 9001: 2015, i-ISO 13485: i-2016 / NS-EN ne-ISO 123485: i-2016 iqinisekisiwe, futhi siziqhenya ngamazinga aphansi kunawo wonke embonini yethu.
UMenzi weChapmanIgumbi lokuhlanza le-Class 8 eliqinisekiswe nge-ISO, kanye nendawo yangasese yenkampani kadadewabo i-NKS's Class 7 eSingapore ivimbela ukungcoliswa uthuli nezinye izinhlayiya ezisemoyeni futhi ihlangabezana nezindinganiso ze-ISO ezidingekayo ekukhiqizeni inhlanzeko.
Njengenye yezinkampani zomhlaba jikelele zokujova umjovo, UMenzi weChapman isebenza kuphela nge-liquid silicone injection injection molding. Sinobuchwepheshe bokukhiqiza ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisukela ekuqhubekisweni kokukhiqizwa kuye ekukhiqizweni kwe-serial kwezingxenye ezinemba kakhulu. sihlela inqubo yethu ye-QA ukuhlangabezana nezidingo zakho ezithile.